Choose Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Functions caancala jedhu filadhu
Yoo Haalii hin oollee tokko milka'ee, barruu saaga. Fakkeenyaaf, sanduuqa Haala keessatti "sun 1 qixxee" dhaa galchiitii, kana booda, barruu isa yammuu gegeeddaraichii "sun" qixxee "1" sanduuqa Sanabooda keessatti yeroo haalii feetu siif milkaa'u, akkasumas sanduuqa Kanamalee keessatti haaliichi milkaa'u dhabu barruu isa mul'ifamu sanaa galchi. Gegeedaramaa "sun" qindeessuuf, caancalaa Gegeedaramaawwan cuqaasiitii, sanduuqa Maqaa keessaa "Gegeedaramaa Qindeessii", Akaakuu "sun" akkasumaas gatiissa sanduuqa Gatii keessaa filadhu.
Dirree barruu isa ati cuqaasuun gargaaramuudhaan galmee keessatti banuu dandeessu saaga.
Dirree isa galmee keessaa yammuu cuqaastu, dirree barruu isa maakroo dammaqsu saaga. Dirreetti maakroo tokko ramaduuf, qabduu Maakroo cuqaasi.
Fakkeenyaaf, saxaatoodhaaf, galmee keessatti dirree iddooqaa saaga. Galmee keessaa dirree iddooqa yammuu cuqaastu, wantaa isa bade sana akka saagdu karraa siif saaqa.
Akka arfii tokkootti dalaguuf akka danda'aanitti, hanga arfiiwwan 6 tti waliitti camada. Amalii kun kan jiraatu, bocqubee Eeshiyaa yammuu degeeramaa ta'u qofa.
Dirreewwan dalagaatiif, dirreen dhangii dhangiiwwan Akaakuu iddooqaa qaban qofaaf fayyada. Asitti, dhangiichi wantaa isa iddooqaan bakka bu'uuf sana murteessa.
Saanduqoota Kanabooda fi Kanamalee keessatti dhangiicha "maqaakuusdeetaa.maqaagabatee.maqaadirree" fayyadamuudhaanis dirreewwan kuusdeetaa saaguu nidandeessa.
Yoo maqaan gabatichaa yk dirrichaa kuusdeetaa ta'e keessa hinjiraanne, homtuu hinsaagamu.
Yoo "maqaakuusdeetaa.maqaagabatee.maqaafaayilaa" keessaatii, waraabbii makte, himichi akka barruutti saagama.
Maakroo isa yeroo dirree irra cuqaastu akka ka'u barbaaddu filadhu.
Maqaa maakroo filataamee mul'isa.
Barruu isa dirree iddooqaa keessatti akka argamu feetu barreessi.
Barruu isa yoo haalli tokko mijate dhoksuu barbaaddu barreesssi.
Arfiiwwan walitti camaduuf barbaaddu galchi. Baay'inni ati walitti camaduu dandeessu 6 caaluu hindanda'u. Dirqalli kun gosa dirree Arfiiwwan camadi qofaaf jiraata.
Dirree filatameef, gatii galchi.
To'attoonni kana itti aanan dirreewwan Tarree naqaa jedhamaniif agarsiifamu:
Maalimaa haaraa saagi.
Tarree irraatti MaalimaaIda'a.
Wantoota tarree irraa
Wantoota tarreessa. Wantaan qarqaraa gubbaa irraa galmee keessaatti mulatteerra.
Tarree irraa wantaa filataaman haqa.
Tarree keessaa wantaa filataaman ol siqsa.
Tarree keessaa wantaa filataaman gad siqsa.
Maqaa addataa Tarree naqaatiif saagi.
Galmee keessaa dirree Tarree naqaa yeroo cuqaastu qaaqii kun mul'ata.
Title is: Dalagalee